Barlamaanka Puntland oo Go’aamo ka soo saaray shirkii uga socday Garowe – Radio Daljir
Luulyo 12, 2015 6:17 b 0
Axad, Luuliyo 12, 2015 (Daljir) — Mudanayaasha barlamaanka dowladda Puntland oo kujira kalfadhigoodii 35aad maalmahaana dood culus kala arrimaha federalka iyo qaar kamid ah xeerar iyo qodobo katirsan dastuurka Soomaaliya oo ay wax ka bedeshay xukuumadda Soomaaliya.
Mudanayaasha barlamaanka oo matalaya shacabka reer Puntland ayaa waxaa ay doodoodii cuslayd kasoo saareen qodobo dhowr ah oo ku saabsan arrimihii ay ka hadlayeen beryahaan, waxaana ay joojiyeen ilaa wadatashi laga sameeyo xeerar iyo shuruuc lagu dhaqan geliyey magaalada Muqdisho.
Dhanka kalena barlamaanka dowladda Puntland ayaa waxa ay laaleen gudiyo dhowr ah oo dhowaan lagu ansixiyey magaalada Muqdisho, waxaana ay tilmaameen inaysan ka shaqayn karin deegaamada Puntland ilaa wadatashi sida sharciga ah lagu soo magacaabo.
Mudanayaasha ayaa waxa ay sidoo kalena sheegeen in hadii dowladda federalku aysan wax ka bedelin cabashada Puntland ee ku aadan aayaha dalka iyo khiyaanooyinka lasameeyey ay barlamaanka Puntland kalfadhigooda dameb uga arrinsna doonaan guud ahaan kasii mid ahaan shaha iyo lashaqaynta dowladda federalka ah.
Ugu dambayntiina barlamaanka ayaa faray Hay’adaha dowladda ee ay quseeyaan inaysan lashaqayn gudiyada khaas ka ah ee maanta go’aamada rasmiga ah ay barlamaanku ka gaareen, iyadoona bedelkeeda wasiirkii lashaqeeya sharciga looga yeeri doono.